INDLELA YOKUPHUMELELA NGEXESHA LOKUBUYA KWAKHO KWESATURN-I-LUNAR ASTROLOGY - UKUVUMISA NGEENKWENKWEZI
Eyona Ukuvumisa Ngeenkwenkwezi Indlela yokusinda kunye nokuphumelela ngexesha lokubuya kwakho kweSaturn
I-Saturn yakho yokuqala kunye neyona nto ichaza i-Saturn yenzeke phakathi kweminyaka eyi-27 ukuya kwi-31. | I-Calculator yokuBuyisa iSaturn yasimahla | Qonda iSaturn yakho yokuBuyisa
UkuthandanaNge-12 ka-Okthobha, ngo-2021
Ngenye yezona ziganeko ezibalulekileyo zeenkwenkwezi zobomi bakho obutsha - ngoko kutheni wonke umntu esoyika ukuBuyisa kwakhe iSaturn? Inyaniso kukuba kukho ulwazi oluninzi olubi malunga nendlela uSaturn echaphazela ngayo ubomi bethu ngeenkwenkwezi. Kwaye Ukubuya kwakho kweSaturn - ngelixa ngokuqinisekileyo kunzima - lithuba lokuchaza ingqiqo yakho yokwenyani.
Yintoni iSaturn yakho yokuBuyisa?
I-Saturn yakho yokuBuyisa iphawula okokuqala ukususela ekubeni wazalwa ukuba iSaturn ikwindawo efanayo esibhakabhakeni njengoko kwakunjalo ngexesha lokuzalwa kwakho. Iimpembelelo zeSaturn zisibonisa apho ebomini bethu sineendawo zokukhula kunye nokuphucula kwaye xa uSaturn ebuyela kwindawo yayo yemvelaphi kwitshathi yakho yokuzalwa, luphawu lokuba ezi ngcamango kunye nezicwangciso owakhe kuzo ubomi bakho ziya kuba ngumngeni.
Ingaba iSaturn yakho ibuya nini?
I-Saturn yiplanethi yothando olunzima kwaye ihlala imele indawo esilwa nayo kakhulu; nokuba kungenxa yokulindela kwabanye okanye oko sikulindeleyo kuthi. Nangona kunjalo, ngothando olunzima luza nezifundo ezinkulu. Fumana imihla yeSaturn yakho yokuBuyisa ngezantsi kwaye ufunde isikhokelo sakho somntu ukuze usinde kwiSaturn!
Bala umhla ochanekileyo weSaturn Return yakho Apha .
Ingaba iSaturn yakho iya kuhlala ixesha elingakanani?
Ukubuya kwakho kweSaturn ngqo kuya kuhlala iintsuku ezimbalwa xa iSaturn ibuyela kwindawo yayo yokuqala esibhakabhakeni ngomhla wokuzalwa kwakho. Imiphumo epheleleyo yeSaturn yakho yokuBuyisa inokuvakala kwangoko kwiminyaka eyi-27. Oku kungenxa yokuba kuthatha iSaturn phantse iminyaka emithathu ukuhamba ngokupheleleyo ngomqondiso kunye nomhlaba kwelinye icala, kwaye impembelelo yeSaturn ebomini bakho ihlala kule nto. lonke ixesha.
Ukubuya kweSaturn kwiCapricorn
Imihla yokuzalwa: ngoFebruwari 13, 1988–Juni 9, 1988; NgoNovemba 11, 1988-Februwari 6, 1991
Igqityiwe: Disemba 19, 2017–Matshi 21, 2020; Nge-1 kaJulayi, 2020–16 kuDisemba, 2020
Ukuba wazalwa xa iSaturn iseCapricorn (1988 ukuya ku-1991), uhambe ngeSaturn Return yakho ukusuka kwi-2017 ukuya ku-2020. Congrats - uyenziwe !! Eyakho Ukubuya kweSaturn ibifunda indlela yokuthatha ulawulo lomsebenzi wakho kwaye uchaze ngokutsha into oyixabisileyo kobu bomi . Ungumntu osebenza kancinci ukuya kwiinjongo zakho kwaye ngoku uyonwabela iziqhamo zomsebenzi wakho kule minyaka mithathu idlulileyo. Lixesha lokuba ube nendalo yakho yamabhongo.
Ukubuya kweSaturn kwi-Aquarius
Imihla yokuzalwa: Februwari 6, 1991–Meyi 20, 1993; NgoJuni 29, 1993–Jan. 28, 1994
Iyenzeka: Matshi 21, 2020–Julayi 1, 2020; Disemba 16, 2020–Matshi 7, 2023
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn ufunda ukwenza eyakho indawo yokuhlala. Uye wasokola ukuziva njengomntu wangaphandle ixesha elininzi lobomi bakho. Mhlawumbi uziva ngathi awungeni ndawo okanye kwindawo enye. Ewe, u-Aquarius othandekayo, lixesha lokudala ukukhanya kwelanga ukuze abanye bangene. Ukubuya kwakho kweSaturn kuya kufuna ukuzincama ngokuthanda uluntu lwakho. Xa uye kwelinye icala, uya kuvuzwa ngonxibelelwano, ubuhlobo, kunye nothando olungazange lube nalo ngaphambili.
amakhwenkwe ukucheba iinwele ezigobileyo
Imihla yokuzalwa: ngoMeyi 20, 1993–Juni 29, 1993; NgoJanuwari 28, 1994–Aprili 6, 1996
Iyenzeka: Matshi 7, 2023–Meyi 24, 2025; Agasti 31, 2025–Feb. 13, 2026
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn ufunda ukumisela imida . IiPisces eziguquguqukayo, eyona nto ingaqondakaliyo yemiqondiso. Uchithe ubomi bakho usebenzela abanye kwaye ubancede balungise iingxaki zabo ngaphandle kokucinga kakhulu ngeyakho. Ngaphandle kweengcambu ezomeleleyo, iiPisces zinokukhawuleza zikhukuliswe phezulu kwaye zide kude nekhaya. Lixesha lokufunda indlela yokukhusela amandla akho kwaye ugxininise izipho zakho kwiinjongo ezenza uzive usisiseko.
Ukubuya kweSaturn kwi-Aries
Imihla yokuzalwa: ngoAprili 6, 1996–Juni 8, 1998; Oktobha 25, 1998–Feb. 28, 1999
Iyenzeka: Meyi 24, 2025–Ag. 31, 2025; NgoFebruwari 13, 2026–Aprili 12, 2028
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn kukufunda indlela yokuba yinkokeli enovelwano. Njengophawu lweKhadinali yoMlilo, udla ngokuhlawulisa phambili ngaphandle kokukhathalela ukuphepha impixano okanye ukugruzuka kwe-egos. Yeka ukuzama ukwenza yonke into ngokwakho-kwaye ufunde ukukhokela ngomzekelo kunokuba uhlale ulawula.
Ukubuya kweSaturn kwiTaurus
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn sifunda indlela yokulwa notyekelo lwakho lobuvila. Ewe, iBull ihamba kancinci ebomini-kodwa ungavumeli ithuba likuthintele eminweni yakho! Umsebenzi wakho kunye nemali isenokungabi yingqwalasela yakho ephambili kodwa lixesha lokufunda kumtsalane wendalo weTaurus wobutyebi ngokufaka umsebenzi onzima.
Ukubuya kweSaturn kwiGemini
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn kukufunda indlela yokuzibonakalisa ngayo. Ngokuqinisekileyo, ubusoloko unesipho se-gab kunye nezakhono zokubhala ezibukhali. Kodwa ugqibele nini ukuzibeka apho? Impembelelo yakho elawulwa yiMercury ikwenza ube neentloni kwaye uzigxeke. Ngoku lixesha lokuba uphucule ilizwi lakho kwaye ufunde ukuthetha.
Ukubuya kweSaturn kwiCancer
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn sijongene nemiba yokuxhomekeka kwakho ngokubambisana kwaye ufunde ukuzithanda. AmaCancer ahlala egalela uvelwano kwabanye ukuze aphephe ukusebenza ngokwawo. Ngoku lixesha lokucinga ngaphakathi kwaye uphilise umntwana wakho wangaphakathi, amanxeba osapho, kwaye womeleze ubudlelwane bakho nawe.
Ukubuya kweSaturn kuLeo
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn sifunda ukukhululeka kwesikhumba sakho . Masibe yinyani - uhlala uziva umgangatho wakho weenkwenkwezi, kodwa ukuzithemba akuzange kuhlale kuhambelana. Uyasokola ukuziva uqhagamshelwe kwiziko lakho loyilo kunye nenkuthazo. Ukubuya kwakho kweSaturn lixesha lokufumana i-fuel eya kukuvumela ukuba ushiye uphawu lwakho olulodwa kwihlabathi.
Ukubuya kweSaturn kwiVirgo
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn ufunda ukuyeka . UVirgo osweleyo, sele uza kufunda ukuba ayizizo zonke izinto ebomini ezinokuhlelwa kwiibhokisi ezincinci ezicocekileyo! Ukuza kuthi ga ngoku, imfuno yakho yolawulo ikubeke phambili. Ngoku, lixesha lokuba ufunde ukuyeka iindlela zakho ze-nit-picky kwaye ufunde ukwamkela iimpazamo njengenxalenye yokuba ungubani.
Ukubuya kweSaturn kwiLibra
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn ufunda indlela yokufumana ulungelelwano ebomini bakho. Ngelixa ukudlala umenzi woxolo kukunike izibonelelo, kukwenze ukuba ungalingani. Uchithe ixesha elininzi kunye namandla kwimisebenzi okanye abantu abangakunikiyo uthando olufanayo. Okanye mhlawumbi uzama ukuba nayo yonke into kwaye ungabahoyi abantu kunye nezinto ozikhathalele ngokwenene. Ubudlelwane bexesha elide buphezulu emoyeni kunye noSaturn eLibra kodwa yazi ukuba abalungileyo baya kusinda kwisiqhwithi.
Ukubuya kweSaturn kwiScorpio
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn kufunda indlela yokwamkela amandla akho. I-Saturn kwi-Scorpio yindawo enamandla, enomdla. Ukuza kuthi ga kweli nqanaba, mhlawumbi unengxaki yokuba namandla akho kunye nobuchule bendalo bokutsala ubuninzi. Ngoku lixesha lokuba uziguqule kwaye ungene kumandla akho - kungakhathaliseki ukuba indlela engaqhelekanga ibonakala ngayo kwabanye.
Isifundo esibalulekileyo sokuBuyisa kwakho iSaturn kukufunda indlela yokwandisa i-horizons yakho. I-Sagittarius ngamandla akho omlilo aguqukayo, ihlala inzima ukuba ifundwe ngabanye. Uphile ubomi bakho ngokulangazelela ukuphonononga kodwa uluntu olulindelweyo lucinezela wena. Lixesha lokuba uthathe olo hambo, ucele umngeni kwiinkolelo zakho, wandise i-horizons yakho, kwaye uzifumane.
Ngaba unokuba nokuBuyisa okungaphezulu kweSaturn?
Ewe! Phakathi kweminyaka engama-57-60, uya kudlula iSaturn Return yesibini oko kuphawula inguqulelo ebudaleni. UkuBuyiswa kwakho kweSaturn okwesibini kuya kuba yingxaki kuphela ukuba unikezele kwimikhwa emidala oye wafuna ukuyishiya ngexesha lakho lokuqala lokuBuyisa iSaturn. Kwabo bethu banethamsanqa ngokwaneleyo lokuhlala kakhulu ubudala, yakho okwesithathu iSaturn Return kwenzeka malunga nobudala be-87. Olu hambo lokugqibela luphawula utshintsho lwakho ukuya kumdala njengeminyaka yakho yamava, s. Ukuzabalaza, noloyiso ngoku lunokusetyenziswa ukufundisa nokukhokela isizukulwana esilandelayo.
yintoni iplanethi yam elawulayo
#2 ubude beclipper
indlela yokuluka iinwele zabafana
iinwele zamadoda ajongene ne-oval